Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Smart TV ibonelela ngeMowudi entsha yoMenzi wefilimu
Ukuqala kule veki, i-LG iqala ukukhupha uhlaziyo oluya kwenza ukuba bonke abathengi be-LG 2020 kunye no-2021 4K kunye ne-K HUD Smart TV kwihlabathi jikelele bakwazi ukujonga ngokuzenzekelayo iimuvi kunye nothotho lweVidiyo kwiVidiyo yeFilmmaker Mode, ebavumela ukuba babukele. amava ngendlela abaqulunqi bomxholo abawujonge ngayo.
I-Filmmaker Mode yenziwe yi-HUD Alliance, equlethwe ngabavelisi bezinto zombane ezikhokelayo emhlabeni, iifilimu kunye nezitudiyo zikamabonwakude, abasasazi bomxholo kunye neenkampani zobuchwepheshe, ezifuna ukuqinisekisa amava okubukela e-HUD angcono kakhulu. Yathi yatyhilwa okokuqala ngo-2019 kwaye yaboniswa kwiiTV ze-LG ngo-2020, iMowudi yeFilimu yenzelwe ukugcina injongo ebonwayo yomyili womxholo, izise amava okubukela ekhaya ngokusondeleyo kangangoko kunokwenzeka kukhupho lwethiyetha yokwenyani.
I-LG kunye ne-Amazon ngoku ithatha loo mbono inyathelo eliya phambili kunye nomxholo weVidiyo yeNkulumbuso efakwe ngomqondiso obangela ngokuzenzekelayo iModi yoMenzi wefilimu kwi-4K kunye ne-K HUD iimodeli ze-LG TV eziqhuba i-webs 5.0 kunye ne-webs 6.0. Olu buchule lweeTV ezihambelanayo zokubona kunye nokulungelelanisa izicwangciso kwiModi yoMenzi weFilimu ngaphandle kwesidingo sombukeli ukuba atshintshe ukusetwa ngesandla ngushishino kuqala kwaye uvula indlela yeTV ezizayo ukuxhasa ngcono iinkonzo zokusasaza ngaphandle kokubeka amanyathelo ongezelelweyo kubabukeli.
Ngelixa iimpawu zokusetyenzwa kwemifanekiso ezinje ngokugudiswa kwentshukumo kunye nokulola umfanekiso zilungele uninzi lweendlela zomxholo kubandakanya imidlalo kunye nemiboniso bhanyabhanya, ngamanye amaxesha zinokwenza iifilim ezibonakala zigudile kakhulu kwaye zicutshungulwe kakhulu. Imowudi yomenzi wefilimu icima ngokuzenzekelayo naziphi na iisetingi zokucwangcisa imifanekiso ezinokuthi zenze iimuvi zivakale zingekho ngokwemvelo kwaye zibangele ukuba zibonise ngokwahlukileyo kwindlela abalawuli bazo abanokufuna ngayo ngelixa begcina umlinganiso wembonakalo yefilimu, imibala kunye nereyithi yefreyimu ukuze bafumane amava ayinyani. Idityaniswe nobona bumnyama bunzulu, umahluko ophuculweyo kunye nemibala eqaqambileyo yeeTV eziphucukileyo zomlenze, ababukeli baya kufumana ubunzulu obungenakuthelekiswa nanto kunye nokwenyani ngokhetho olukhulu lweVidiyo bhanyabhanya kunye nothotho lwePrime Video, kubandakanya Imvelaphi yeAmazon efana neMarvelous Mrs. Mussel, Amakhwenkwe, The Ngomso Imfazwe kunye olulindelekileyo oluzayo series The Wheel of Time premiering November 19. Ukucofa-kanye ukufikelela kwi Prime Video app inikezelwa isitshixo eshushu kwi Umlenze Magic Remote.
Ukongeza kumgangatho wemifanekiso ye-stellar, iiTV ze-HUD zeLeg's ezibandakanya umgca wayo omangalisayo we-OILED TVs, ziqhayisa ngoluhlu lweempawu eziphucula ngakumbi amava okubukela i-cinematic. I-Dolby Vision™ IQ ilungelelanisa ngobulumko useto lwemifanekiso ngokusekwe kuhlobo lomxholo kunye neemeko zokukhanya ze-ambient, ezikhokelela kumgangatho ogqibeleleyo wemifanekiso yefilimu nakuyo yonke indawo. Ngesandi esigqwesileyo, iDolby Atoms® yenza ukuba kujikelezwe ngokwesithuba okunenkcukacha ezinceda ababukeli batshayele kuyo nantoni na abayibukeleyo.